Windows 7 rue ụbọchị a ka na-achọsi ọrụ kachasị ike n'ụwa. Ọtụtụ ndị ọrụ, ọ bụghị ịghọta ihe ngosi ọhụrụ nke Windows, nke pụtara na nke asatọ, nọgide na-eme ihe ochie ahụ, ma ọ ka dị ugbu a na-arụ ọrụ. Ma ọ bụrụ na ị kpebie ịwụnye Windows 7 n'onwe gị na kọmputa gị, ihe mbụ ị chọrọ bụ mgbasa ozi nwere ike ịgbasa.
Ihe oyiyi diski bụ nkenke dijitalụ nke faịlụ ndị edere na diski ahụ. Foto ga-aba uru na ọnọdụ dị iche iche ma ọ bụrụ na enweghi ike iji disk ma ọ bụ ịchekwa ozi ị na-enwe mgbe niile iji dee na disks. Otú ọ dị, ị nwere ike ọkụ ihe oyiyi ọ bụghị naanị na disk, kamakwa na USB flash drive, na isiokwu a ga-egosi otú e si eme nke a.
Kedu esi eji UltraISO?
Ihe oyiyi disk bụ akụkụ dị mkpa nke ahụmahụ kọmputa ugbu a. Ebe ọ bụ na nkịtị, disks disks na-echefu, ha na-anọchi site diski disks. Mana maka diski dị njikere ịchọrọ windo arụmọrụ, ma ọ bụ disk nke ị nwere ike ịkụ ya. Na ebe a ga-enyere mmemme UltraISO, nke anyị ga-aghọta isiokwu a.
UltraISO: 121 njehie mgbe edere na ngwaọrụ
UltraISO bụ ngwá ọrụ dị mgbagwoju anya nke na-ezutekarị nsogbu ndị a na-apụghị idozi ma ọ bụrụ na ị maghị otú e si eme ya. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na otu n'ime ihe ndị na-adịghị adịkebe, ma na-emejọ njehie UltraISO ma dozie ya. Njehie 121 na-apụta mgbe ị na-edekọ ihe oyiyi ahụ na USB-ngwaọrụ, ọ dịkwa obere.
Ịmepụta bọtịnụ kwadoro na UltraISO
Ejiri windo dị njikere iji gụọ disks dị ọcha, ọ bụkwa ngwá ọrụ dị mkpa na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kọmputa ọ bụla. Iji mbanye, ị nwere ike ịlele faịlụ oyiyi disk, ma ọ bụ jiri ha dị ka ụdị NoDVD. Otú ọ dị, ọ bụghị onye ọ bụla maara otú e si emepụta windo arụmọrụ, na n'isiokwu a, anyị ga-ele ihe atụ nke ịmepụta windo na-arụ ọrụ na usoro UltraISO.
Esi na-efe ihe oyiyi na UltraISO
Na nso nso a, disks aghọwo ihe kariri ihe gara aga, na mgbasa ozi ndị na-agbanwe agbanwe agbanwewo nkesa na draịva mbụ. Iji rụọ ọrụ na disks dịpụrụ adịpụ ị chọrọ ụfọdụ mmemme ị nwere ike ịmepụta ihe oyiyi. Ma, olee otú ị ga-esi zoo onyinyo a iji mee ihe?
UltraISO: Akwukwo ihe omumaghi ama
Otu n'ime njehie kachasị njọ na UltraISO bụ ụdị ihe oyiyi amaghị. Njehie a na-emekarị karịa ndị ọzọ ma sụọ ngọngọ n'elu ya dị mfe, Otú ọ dị, mmadụ ole na ole maara otú e si edozi ya na ihe kpatara ya. N'isiokwu a anyị ga-emeso nke a. UltraISO bụ usoro ihe omume nke na-arụ ọrụ na ihe oyiyi diski, njehie a na-emetụta ha, nke a na-egosikwa na aha ya.
Njehie njehie UltraISO: Mwube nwube dee ụdị ihu igwe
Njehie na-emekarị ka ndị ọrụ nke usoro ọ bụla nwee nsogbu, UltraISO abụghịkwa otu. Ihe bara uru a na-ezutekarị njehie na mgbe ụfọdụ enweghi ike idozi ya n'enweghị enyemaka ndị ọzọ, otu n'ime njehie ndị a bụ "Njehie nkwụsị dee ụdị ọnọdụ", nke anyị ga-emeso n'isiokwu a.
Otu esi agba ihe oyiyi na diski na usoro UltraISO
Ọtụtụ ndị ọrụ maara nke ọma na usoro UltraISO - nke a bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị ewu ewu maka ịrụ ọrụ na mgbasa ozi na-ekpofu ihe, faịlụ ntanetị na ngwanrọ. Taa, anyị ga-ele anya iji debe ihe oyiyi ahụ na diski na usoro a. Ihe omume UltraISO bụ ngwá ọrụ dị irè nke na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na ihe oyiyi, dee ha na windo kọmputa USB ma ọ bụ diski, mepụta ụgbọala nwere ike ịbanye na Windows OS, kwụo windo kwadoro na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ndozi nsogbu nke igosi igwe windo na UltraISO
Mgbe ụfọdụ, USB flash drive abụghị naanị ngwaọrụ mkpanaka maka ịchekwa ozi, kamakwa ngwá ọrụ dị mkpa maka ịrụ ọrụ na kọmputa. Dịka ọmụmaatụ, ịkwalite nsogbu ụfọdụ ma ọ bụ iji rụgharịa usoro sistemụ. Ọrụ ndị a ga-ekwe omume site na usoro UltraISO, nke nwere ike imepụta ngwá ọrụ yiri ya site na windo mbanye.
UltraISO: Na-agbanye mgbatị windo adịghị achọta
UltraISO bụ usoro bara uru, nakwa n'ihi ọrụ ya, o siri ike ịghọta akụkụ ụfọdụ. Ọ bụ ya mere o ji esiri ike ịghọta ihe kpatara nke a ma ọ bụ na njehie ahụ gbagotara elu. N'isiokwu a, anyị ga-aghọta ihe kpatara njehie "Achọpụtaghị na ịchọta ọhụụ" na-egosi na dozie ya site na iji nhazi nhazi dị mfe.
UltraISO: Ịwụnye egwuregwu
N'oge na-adịghị anya, ọ na-esiri ike igwu egwuregwu ndị ejiri chekwaa. Ndị a na-abụkarị ndị a zụrụ azụ na ikikere nke chọrọ ka diski na-abanye na ntinye aka. Ma n'isiokwu a anyị ga-edozi nsogbu a site na iji usoro UltraISO. UltraISO bụ usoro maka ịmepụta, ọkụ na ọrụ ndị ọzọ na ihe oyiyi disk.
UltraISO: Ihe e kere eke
Ihe oyiyi disk bụ nnochi disk dị iche iche nke nwere ike ịchọrọ n'ọtụtụ ọnọdụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ụfọdụ ozi si na diski maka inwekwu ederede na diski ọzọ ma ọ bụ iji jiri ya dị ka diski diski maka nzube ya, ya bụ, tinye ya n'ime windo kwadoro ma jiri ya dị ka diski.
UltraISO: Ịmepụta flash mbanye Windows 10
Windows ọhụrụ nke Windows, nke, dị ka anyị si mara, ga-abụ onye ikpeazụ, natara ọtụtụ uru karịa ndị gara aga. Ọrụ ọhụrụ apụtawo na ya, ọ dịkwuo mfe ịrụ ọrụ na ya ma ọ dị nnọọ mma. Otú ọ dị, dịka ị maara, iji wụnye Windows 10 ị chọrọ Internet na bootloader pụrụ iche, mana ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike ibudata ọtụtụ gigabytes (ihe dịka 8) nke data.